Horudhac: Watford vs Chelsea… (Rikoorrada ay sameyn karaan Ranieri, Lukaku & Werner oo loo daawan doono kulanka caawa) – Gool FM
Ahmed Nur December 1, 2021
(Watford) 01 Dis 2021. Naadiga Watford oo bishii lasoo dhaafay garoonkeeda ku garaacday Manchester United isla markaana sabab u noqotay in la ceyriyo Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa caawa marti gelineysa naadiga hoggaamineysa Premier League ciyaar ka tirsan horyaalka Ingiriiska.
Watford ayaa kaalinta 17-aad ee kala sarreynta horyaalka ku jirto iyadoo leh 13 dhibcood, halka Blues oo kulankii ugu dambeeyay barbarro lasoo gashay ay hoggaanka ku heyso 30 dhibcood.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 10:30 Habeennimo xilliga Geeska Afrika.
Garoonka: Vicarage Road
Garsooraha: David Coote (England)
Weeraryahanka xilliga wanaagsan ku jira ee Emmanuel Dennis ayaa shaki laga gelinayaa inuu caawa u ciyaaro kooxdiisa Watford kaddib markii dhaawac looga saaray kulankii ay guuldarrada kala kulmeen Leicester City horraantii toddobaadkan, waxaana si toos ah ciyaartan u seegaya Ismaila Sarr oo dhaawac jilibka kasoo gaaray garoommada uga maqnaan doona muddo bil ah.
Dhanka kale, Chelsea ayaa walaac ka muujineysa shakiga la gelinayo Reece James, Jorginho iyo Timo Werner, halka uu si toos ah ciyaartan u seegayo N’Golo Kante.
Watford ayaa is-araggan guuldarro kala kulantay toddobo kulan siddeeddii jeer ee ugu dambeysay Premier League, waxaana laga dhaliyay 33 gool taasoo la micno ah in celcelis ahaan laga dhaliyay 4.1 gool kulankiiba.
Dhinaca kale, The Hornets ayaa Chelsea garaacday kaliya hal jeer 18-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay isku arkaan dhammaan tartammada, saddex barbarro iyo 14 guuldarro ayaana u raacday, halka Blues ay caawa raadineyso inay saddex kulan oo xiriir ah horyaalka guul kusoo qaadato Vicarage Road markeedii ugu horreysay.
Watford ayaa afar guuldarro la kulantay horyaalka lixdii kulan ee ay hoos joogto xukunka Claudio Ranieri, iyadoo Xisco Munoz la ceyriyay markii uu afar guuldarro la kulmay toddobadii ciyaar ee ugu horreysay Premier League xilli ciyaareedkan.
Macallin Ranieri ayaa noqon kara macalinkii ugu horreeyay ee Chelsea soo maamulay isla markaana horyaalka ku garaacay isagoo hoggaaminaya labo naadi oo kala duwan, horraan isagoo Leicester City wata ayuu garaacay sanadkii 2015.
Emmanuel Dennis barbarreeyay Eric Cantona, Jurgen Klinsmann, Arjen Robben, Andrey Arshavin iyo Bruno Fernandes isagoo noqday ciyaaryahankii lixaad ee shan gool iyo shan caawin sameeya 12 kulan oo Premier League ah ama wax ka yar.
Chelsea ayaa guul soo wada gaartay dhammaan afarteedii kulan ee ugu dambeysay horyaalka oo ay bannaanka kusoo ciyaartay iyadoo wadar ahaan 10 gool dhalisay halka aan shabaqeeda la taaban kulammadaas.
Romelu Lukaku ayaa noqon kara ciyaaryahankii ugu horreeyay ee gool Premier League ah kusoo dhaliyay garoonka Vicarage Road isagoo u ciyaaraya saddex naadi oo kala duwan. horraan waxa uu halkaas gool kusoo dhaliyay isagoo u ciyaaraya Everton iyo Manchester United.
Timo Werner ayaa u baahan kaliya hal gool si uu u gaaro goolkiisii 100-aad ee ciyaaraha horyaallada.
Horudhac: Aston Villa vs Manchester City...(Steven Gerrard oo taariikh u dhigi kara Villa & Rikoorka wanaagsan ee ay City ka heysato dhiggeeda)